Ciidamada AMISOM iyo kuwa Al-shabaab oo isla maamulaya magaalada Marka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidamada AMISOM iyo kuwa Al-shabaab oo isla maamulaya magaalada Marka
Ciidamada Xarakada Al-shabaab oo maalintii shalay qabsaday qeyb ka mid ah magaalada Marka ee xarunta gobolka Sh/hoose ayaa weli ku sugan halkaaasi, iyadoo dhinaca kale duuleedka magaalada ay ku sugan yihiin ciidamada AMISOM oo saldhig ciidan ku leh.
Magaalada Marka ee xarunta gobolka Sh/hoose ayaa haatan u muuqata inay u kala qeybsan tahay Al-shabaab iyo AMISOM, kadib markii ay ka baxeen ciidamadii militeriga ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ilaa iyo hadda aan la shaacin sababta keentay inay ka baxaan magaaladaas muhiimka ah.
Dhinaca kale, xiisad colaadeed ayaa ka jirta magaalada Marka, waxaana dadka magaalada qaarkood ay bilaabeen inay ka qaxaan magaalada, iyagoo ka cabsi qaba inuu dagaal ka dhaco.
Gudoomiyaha magaalada Marka ayaa sheegay in Al-shabaab heystaan qeyb ka mida magaalada, laakiin AMISOM ayaa beenisay arrintaasi iyadoo sheegtay inay sugayaan ammaanka dadka magaalada Marka.
Sidoo kale, maamulka gobolka Sh/hoose ayaa isna beeniyay in maleeshiyo ka tirsan ururka Al-shabaab ay magaalada Marka galeen.
Ugu dambeyntii, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sh/hoose Siyaad Cali ayaa VOA u sheegay in gudaha magaalada Marka ay joogaan ciidamada AMISOM sida uu ku dooday, waxaana maamulka gobolka iyo kan magaalada Marka ka dhex jira qas ku saabsan xaaladda magaalada.